पिमेन्टो चीज Make बनाउन सजिलो} - व्यंजनहरु
Layer लेयर मटर सलाद र्यान्च ड्रेसिंगको साथ
तातो कुकुर चिली सॉस कुनै मासु
कसरी फ्रिज गरिएको बच्चा पछाडिको पसलहरू पकाउने
पोर्क टेंडरलिन ग्यास ग्रिलमा बेकनमा लपेटिन्छ
आइसक्रीम बनाउने चट्टान नुन को विकल्प
खुर्सानी पनीर सबै भन्दा राम्रो दक्षिणी शैली फैलिएको छ! तीव्र चेडर, क्रीम चीज, pimentos र seasonings एक डुबकी लागि बनाउँछ वा पागल राम्रो छ। म यस चीजलाई गम्भीरतासाथ चम्चाको साथ खान सक्छु!
यो बहुमुखी पनि छ, तपाईं यसलाई एक को रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एपेटाइजर प्रिटेजेल, ब्यागेल चिप्स वा भेजीजस्ता सेवाहरू, प्लेटबाट मुखमा यस स्वादिष्ट चीजहरू प्रदान गर्ने केहि पनि! पिमेन्टो चीज पनि स्यान्डविचमा फैलाउने रूपमा उत्तम छ ग्रील्ड चीज स्यान्डविच , या त आफैले वा, मेयो विकल्पको रूपमा!
म कस्तो प्रकारको लसुनको रोटी हुँ
पिमेन्टो चीज भनेको के हो?
पिमेन्टो चीज ती पुरानो शैलीको दक्षिणी मनपर्दो मध्ये एक हो जुन समयको रूपमा मुख्य हो। दक्षिणमा यसलाई कहिलेकाँही 'क्यारोलिना क्याभियार' वा 'दक्षिणी दरबार' भनेर चिनिन्छ। तर जे भए पनि तपाईले त्यसलाई के भन्ने, सबैलाई मनपर्दछ किनकि यसको विशिष्ट र पसिलो स्वादको कारण!
crock पॉट goulash व्यंजनहरु ग्राउड गोमांस
यो मेयोनेजको सजिलो संयोजन हो ( ड्यूकको उत्तम हो), तीखो चेडर चीज र निश्चित पाठो।
त्यसो भए, पिमेन्टोस के हुन्? यी सानो रातो बिटहरू के तपाईं जैतूनमा फेला पार्नुहुन्छ र डिप्स, ड्रेसिंग र क्यासरोलहरूमा ठूलो स्वाद थप्नुहुन्छ। तिनीहरू सानो साना मिर्चबाट बनेका छन् 'चेरी मिर्च' भनिन्छ ( यहाँ pimentos को बारे मा अधिक )।
कसरी पिमेन्टो चीज बनाउन
पिमेन्टो चीज बनाउन १, २, as जत्तिकै सजिलो छ! कुन महान छ, विचार गर्दै हामी यसलाई कत्तिको चाँडो पार गर्छौं।
हातले वा एक प्रोसेसरमा तीखो सेदार चीज चीज।
Shredded चीज र pimentos बाहेक सबै सामग्री संयोजन। चिकनी र मलाईदार सम्म राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
यो स्प्रेड सुपर चंकी र स्वादिष्ट बनाउनको लागि अन्तमा सिर्डेड चीज र पिमोटोमा मोड्नुहोस्! धेरै सजिलो, सही?
पिमेन्टो चीजको सेवा गर्न
तपाईंको मनपर्ने क्र्याकर्समा फैलिनुहोस्, स्यान्डविचमा रमाउनुहोस्, वा भेज्जीहरू, प्रेट्जेलहरू, वा डिपको रूपमा सेट गर्नुहोस्। ब्यागेल चिप्स !
साधारण सेलेरी डिपिंग स्टिकहरू वा अन्य भेजीहरूको साथ प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
Veggie प्लेटरहरु को लागी वा चिप्स र dips को एक एरे संग उत्तम!
काटिएको काकडी र टुक्राको साथ टोर्टिलामा यसलाई रोल गर्नुहोस् फेन्सी स्यान्डविच !
यस सामानमा प्रिट्जेल्स डुबाउन मनपर्नुहोस्!
यसलाई फैलाउनुहोस् बर्गर , लपेट्ने वा स्यान्डविचहरू
के तपाईं यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ?
क्रीम चीजमा अलग हुने र दाना / तरल बन्ने प्रवृत्ति हुन्छ जब फ्रिज गरिएको छ, त्यसैले हिउँ सिफारिस गरिदैन। पिमेन्टो चीज राख्नु पर्छ एक हप्ता सम्म फ्रिजमा ।
केहि बेसी टमाटर वा बारीक काटिएको chives मा थप्नुहोस्।
बिभिन्न चीजका साथ प्रयोग।
पासेदार jalapeños यो फैल एक मसलादार लात दिन्छ।
यसलाई तपाईंको मनपर्नेमा थप्नुहोस् शैतान अण्डा एक सिर्जना गर्न पिमेन्टो चीज चीज अंडा नुस्खा !
स्वादिष्ट पार्टी डिप्स
पालक अर्टिचोक डुबकी - भीड कृपया
Min मिनेट टाको डुब - s मिनेटमा तयार छ!
Tzatziki Sauce - सजिलो दही काकडी डुबकी
रटल डुबकी - सजिलो, पनीर र बहुमुखी
Easy पालक डुबकी - उत्तम पार्टी मिश्रण
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय० मिनेट कुल समयपन्ध्र मिनेट सर्भिंगहरू१२ सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन उत्सवको साथ डुबाउने जुन उत्सवको साथ फुस्किरहेको छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢२ ½ कप चेडर चीज काटिएको, थप तेज
▢½ कप मेयोनेज
▢। औन्स क्रिम चिज नरम
▢। औन्स तातो खुर्सानी सुक्खा र काटियो
▢१ चम्मच वोर्स्टरशायर सस
▢१ चम्मच पहेंलो रायो
▢⅛ चम्मच लाल मिर्च वैकल्पिक
कसरी इलेक्ट्रिक चक्कु संग टर्की स्तन कोर्नु पर्छ
एक कचौरामा मेयोनेज, क्रीम चीज, वोर्स्टरशायर सॉस, पहेंलो रायोको, लसुन पाउडर र लाल मिर्च मिलाउनुहोस्। फ्लफी नभएसम्म ह्यान्ड मिक्सरसँग मिक्स गर्नुहोस्।
पिमेन्टोस र चेडर चीजमा राख्नुहोस्।
मिठो बनावटको लागि, पिन्डोमा फोल्ड गर्नु अघि सेन्डरलाई ह्यान्ड मिक्सरसँग मिक्स गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:२२6,कार्बोहाइड्रेट:दुईg,प्रोटिन:।g,मोटो:एक्काइसg,पागलिएको बोसो:१०g,कोलेस्ट्रॉल:49मिलीग्राम,सोडियम:२77मिलीग्राम,पोटासियम:68मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:१g,भिटामिन ए:5 755IU,भिटामिन सी:।मिलीग्राम,क्यालसियम:१88मिलीग्राम,फलाम:१मिलीग्राम
कीवर्डमरिच पनीर कोर्सएपेटाइजर पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।